Binance Invests $ 10M Into Bermuda Crypto Program - Blockchain News
Kubvumbi 28, 2018 arun
Binance anoronga ugotungidza itsva yose abvume muzinda Bermuda pamusoro mishoma yakatevera, Premier David Burt akazivisa.
Vachitaura Joint venhau neChishanu, Burt yakazivisa kuti gwaro njere yave vakasaina, pasi izvo Binance Charity Foundation achaisa $10 miriyoni kune zvirongwa zvedzidzo chokuita Tech. An okuwedzera $5 miriyoni vachange paakapiwa mu blockchain startups.
Pamusoro pe izvozvo, Binance kuchabatsira hurumende Bermuda kukudziridza pamutemo yemibvunzo cryptocurrencies uye blockchain, uyewo kuva hofisi itsva munyika.
Mafuta vaburitsi 'rakapiwa kuedzwa blockchain-based system kutsiva vaitamba bepa chinyorwa
munyika yose, gungwa tangi ...
Ber co-muvambi & AMP ...
Previous Post:South Korean Finance Minister: Crypto anotyisidzira Fiat System
Next Post:St. Louis Federal Reserve: Bitcoin ari Like Regular Currency
Chivabvu 16, 2018 pa 8:01 PM